State Duma yakagamuchira bhiri yakanangana nekuvandudza kutonga kwehurumende mumunda wekubata zvakanaka mishonga yekuuraya zvipuka uye agrochemicals.
Izvo zvigadziriso zvinomisikidza zvinodikanwa munzvimbo ino, uye zvakare zvinodzora kuitwa kwehutongi hwehurumende mumunda wekubata zvakachengeteka mishonga yezvipembenene uye maagrochemicals, kusanganisira kunzvimbo dzekutarisa pamuganhu weRussian Federation.
Muna 2020, Vladimir agrarians vakatengesa kunze kwegumi nemazana mashanu emazana matani ezviuru zvezvirimwa
Varimi vanogona kusangana nematambudziko nekuda kwekunyanyisa kudzora kwembeu dzinotengwa kunze kwenyika
Kana bhiri iri rikatambirwa, hurumende ichapihwa simba rekubvumidza mutemo weKutonga kweHurumende pamusoro peKuchengetedzwa Kwekudzivirira Mishonga Yezvipembenene neAgrochemicals. Gwaro iri rinobvisa masimba emubatanidzwa nemasimba ekutarisira. Pakutanga, kutarisira munzvimbo ino kwaiitwa neRosselkhoznadzor. Zvisinei, muna Nyamavhuvhu 2011, zvigadziriso zvakatanga kushanda izvo "hazvipe masimba eRosselkhoznadzor nevamwe vakuru vehurumende munzvimbo ino," vanotsanangura vanyori vezvakagadziriswa.
Gwaro rakakurudzirwa nehurumende rinosimbisa kuti "zvinodikanwa zvekuchengetedzwa kwemishonga yekuuraya zvipuka uye agrochemicals, maitiro ekushandisa kwavo, mitemo uye mafomu ekuyera kutevedzera zvinodiwa izvi zvinotemerwa zvinomisikidzwa nezvibvumirano zvepasi rose zveRussian Federation, mutemo weEurasian Economic Union nemutemo weRussian Federation mundima yehunyanzvi mutemo, kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye utsanana uye hutachiona hwehuwandu hwevanhu ".
Iwo mutemo uchajekesawo kuti kutonga kunoitwa panguva yekugadzirwa kwemishonga yekuuraya zvipuka uye agrochemicals muRussian Federation, kupinza kwavo munyika, kuchengetedza, kutengesa, kushandisa, neutralization uye kurasa. Panguva imwecheteyo, zvinokwanisika kupinza zvinhu izvi muRussia chete kuburikidza nehunyanzvi hwekuongorora, huchagadzwa neKabineti.
Kugamuchirwa kwebhiri kuchave nechokwadi chekutevedzwa kwemitemo yekushandisa mishonga yekuuraya zvipuka uye agrochemicals, kubvisa kukanganisa kwakashata pahutano hwevanhu uye nharaunda kana ichishandiswa mukurima, vanyori vezvigadziriso vanogumisa.
Tags: kudzora kubata kwemishonga yekuuraya zvipukaRosselkhoznadzor